को कसले आज कहाँ कहाँ सम्वोधन गरे ? – Gulmiews
को कसले आज कहाँ कहाँ सम्वोधन गरे ?
२४ मंसिर २०७३, शुक्रबार १७:५६ गुल्मिन्युज
गुल्मी, मंसिर–२४ । गुल्मी आन्दोनकोे आज दशौं दिन सिर्जनात्मक दवाव कार्यक्रम गरिएको छ । झाडु जुलुसको आयोजना गरी हिजो अँस्ती टायर वालेर कालो भएको जिल्ला प्रशासन अगाडी लाकुरी मञ्च देखि तम्घास वजार पखाल्ने र सफा गर्ने सिर्जनात्मक कार्यक्रम गरिएको छ ।
फोटो: अनिल खत्री
सरकारको विकृति विसंगति फखाल्ने संकेतका रुपमा निकालिएको छाडु जुलुस तम्घास बजार सरसफाई सकेर पुन लाकुँरी मञ्चमा आई विरोध सभामा परिणत भएको थियो । आजको विरोध सभामा बढि मात्रमा महिलाहरु वत्ता बनाईएको थियो । यसै विच आज सरकार विरुद्धको आन्दोनमा सरकारकै साधन प्रयोग गरिएको थियो ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाको दम्कल मगाएर त्यसबाट पानीको फोहरा हन्दै सडक पकालिएको दृश्य निकै रोमञ्चक देखिएको थियो । आजै जिल्लाका ९ स्थानमा विशाल जनसभाहरु गरिएको छ ।
ईस्माको जनसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सचिव खिलध्वज पन्थी, नेकपा एमालेको तर्फबाट लक्ष्मण बिष्ट , माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संयोजक रिडीमा भएको आमसभामा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य अनन्तराम पौडेल, एमाललेका जिल्ला सदस्य लिनकण्ठ गौतम , माओवादीबाट रामचन्द्र कँडेल लगायतका नेताहरुले सम्वोधन गरेका छन् ।
ईस्मामा नेपाली कांग्रेसबाट सचिव खिलध्वज पन्थी , एमालेबाट जिल्ला सदस्य लक्ष्मण विष्ट , माओवादी केन्द्रका संयोजक विरबहादुर कार्की लगायतका नेताहरुले सम्वोधन गरेका थिए ।
बलेटक्सारमा कांग्रेसबाट शालिक पन्थी , एमालेबाट सोमनाथ सापकोटा र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यदु ज्ञवाली लगायतका नेताहरुले सम्वोधन गरेका छन् । वामीमा काङ्ग्रेसबाट भगतसिंह खड्का , एमालेबाट गणेश विश्वकर्मा , माओवादी केन्द्रबाट शुरेन्द्र नेपाली लगायतका नेताहरुले सम्वोधन गरेका छन् ।
पुर्काेटदहमा काङग्रेसबाट महेन्द्र भण्डारी , एमालेबाट गणेश नेपाली लगायतले सम्वोधन गरेका छन् । खैरेनीमा कांग्रसबाट श्रीप्रसाद भलामी , एमाललेबाट मधुकृष्ण पन्त , माओवादी केन्द्रबाट प्रभात लगायतका नेताहरुले सम्वोधन गरेका छन् ।
मजुवामा कांग्रेसबाट थम्मन केसी , एमालेबाट जंग नेपाली र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राजन केसी लगायतले सम्वोधन गरेका छन् । पुर्कोटदमा कांग्रेसबाट महेन्द्र भण्डारी , एमालेबाट गणेश श्रीपालि लगायतका नेताहरुले सम्वोधन गरेकाछन् । सिमलटारीमा हुने भनिएको आम सभाभने मरभुङ्गवासीले वहिष्कार गरेका कारण हुन सकेन् । जिल्लाका ९ वटै स्थानमा अन्य सान ९ वटै दलका नेता र सवै दलका विद्यार्थी, युवा र महिला संठन तथा पत्रकारहरुलाई समेत सम्वोधन गर्न पठाईएको थियो । सदरमुकामको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले सम्हालेका थिए ।
यसै विच गुल्मीमा मंसिर २७ गते बिशाल आमसभा हुने भएको छ । हजारौंको संख्यामा तम्घासको चिदीचौरमा उतारेर केन्द्रिय नेताले सम्वोधन गर्ने आमसभा अहिले सम्मकै ठुलो बनाउने तयारी भएको जनाईएको छ ।
आमसभामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा क्षेत्र नम्वर २ का सांसद चन्द्र भण्डारी आउने पक्का भई सकेको र एमालेका नेता तथा क्षेत्र नम्वर ३ का सांसद गोकर्ण बिष्ट र माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायममझी समेतलाई उक्त आमसभामा ल्याउनेबारे पहल भई रहेको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका सचिव विरेन्द्र भुसालले जानकारी दिए ।